Oromia Media Network’s video: Oduu Onk 6, 2017 – Kichuu
HomeAfaan OromooTVOromia Media Network’s video: Oduu Onk 6, 2017
Oromia Media Network’s video: Oduu Onk 6, 2017
OBN-Bulchiinsa Lammaa Magarsaa Jajjabataa Jiraa @Saffisa kanaan adeemnaan waan yaadamtu sunatattamatti galma geessi!
Oromia News Network – ONN: Wayyaaneen Oromiyaa bahaatti waraana ifaan ifatti labsuuf qophooftee akka jirtu maddeen saaxilan.
Odeessi nu dhaqqabe akka hubachiisutti, yeroo ammaa kana Waraanni Wayyaanee gama Itoophiyaa bahaa jiru Oromoo hidhannoo hiikkachiisuuf, Liyyuu poolisii immoo deebisee hidhachiisuuf hojiitti jira.
Akka odeessa kanaatti, dhimma kana hojii irra oolchuuf humnooti tikaa fi waraanaas qophaatti walgeettii taasisanii jiru. Odeessi kamiyyuu iccitiin akka eegamu qabamee jira. Poolisii fi humni nageenyaa Oromiyaa odeessa kana akka hin arganne godhame.
Maddeen odeessa kana nuuf dabarsan akka hubachiisanitti, duulli kun bitata Wayyaanee dheeressuuf kan akeekamee dha. Ummati Oromoo fi humnooti naga-jaalattoota duula Wayyaaneen qindeessaa jirtu kana akka hubatanii fashaleessuu keessatti gahee isaanii bahan dhaamsi nu dhaqqabe kun waamicha godheera.
“Ummata Oromoo waan qabdan maraan of-eeggannoo godhaa!” kan jedhe ergaan nu aghe kun, “Alaa mana keessan jabinaa fi qaroominaan eeggadhaa!”jechuunis Injifannoon kan ummata haqaa fi bilisummaaf loluu ta’uu addeesseera.
Wayyaaneen humna liyyuu poolisii Somaalee Oromiyaa irratti bobbaasteen haga yoonaatti ummata Oromoo kuma torbaatamaa ol qe’ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuun kan yaadatamuudha. Duulli babal’ifannoo fi saamichaa kun akka itti fufu, bulchaan naannoo Somaalee Itoophiyaa gidduu kan fuula feesibuukii isaa irratti maxxanseera. (Oromia News Network)
Yunivarsitii Jigjigaatti Hin Deebinu,Lubbuu Keenyaaf Sodaanna
Breaking News: Abadula Gemeda Resigns as Speaker of the Federal Parliament